Welcome to Aayaha Nolosha » HAWEENEYDII ALLE KU XIRNAYD OO WAX KASTOO LAGU SAMEEYO KA BADBAADAY
HAWEENEYDII ALLE KU XIRNAYD OO WAX KASTOO LAGU SAMEEYO KA BADBAADAY
July 7, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Nin ayaa waxuu guursaday gabar aad u qurux badan, aad buuna u jeclaa iyaduna aad bay u jeclayd, laakiin waqtiga duruufihiisa ayaa ku khasbay ninkii in uu u safro magaalo kale si uu u raadsado maciishad iyo biil reerkiisu ku noolaado.
Intii aanu ka bixitimin reerkiisii ayaa waxa uu doonay cid uu kaga sii tago xaaskiisa uu aadka u jeclaa waxaanu isku qanciyey in uu kaga tago walaalkii ay isku aabe iyo hooyada yahiin.
Arrinkaas ayuu u soo bandhigay walaalkii waxaanu kaga tegay reerkii isagoo u kicitimay halkii yoolkiisu ahaa.
Waxaa iska socday maalmaha iyo habeennada waxaana ninkii gabadha quruxda badan lagaga tegay uu damaaciyay gabadhii quruxda badnayd wuxuuna go’aansaday in uu khasbo gabadha oo fara xumeeyo wayse diiday, dabeedna waxaa uu ugu hanjabay haddii ay diido in uu ku fadeexadeyn doono ninkeeda oo war uu u sheegi doono, laakiin taasna way ka diiday oo waxay ku tiri ku dheh walaalkaa waxaad doonto aniga Ilaahay ayaan wakiishay oo igu filane.
Cajiib! Yay talo saaratay allaah (SWT) waana ka yiri Eebe (Ninkii Illaahay talo saarta illaahay baa ku filan) Waa kaas iimaanka dhabta ah.
Waxaa soo noqday ninkii gabadha qabay ee safarka shaqo ku maqnaa, sidii uu ku hanjabay ayuuna walaalkii sameeyay oo wuxuu ninkii ku yiri “Walaalkeyow gabadhii aad igaiga tagtay waan ka jiifsan waayay oo aniga ayuun bay doonaysay in ay i khasabto intaad maqnaydba, rag kalena way u imaanayeen oo maba aha gabadhu mid wanaagsan ee talo waxaan kugu siinayaan tani Xaas kuuma noqotee iska fur waa gabar xune.”!
Gabadhii waxa ay doontay in ay dooddeeda furato, laakiin ninka oo ka carooday warkaas loo sheegay kama hadashiin gabadhii, waxna ma weydiine waa uu furay.
Waxay gabadhii ka dhaqaaqday halkii ay taagnayd waxa ayna u jeesatay halkii ay xigtadeeda ku ogayd waxay soo lugaysay dhul qarfe ah waxay soo dhex jibaaxday buuro iyo saxare waxayna la kulantay wadaad meel cidla’a degan oo ku leh masaajid way ku soo leexatay, waxaanu ka waraystay xaaladeeda waxay uga warantay qisadeedii oo dhamays tiran.
Waxaa uu ku yiri ka waran haddii aad ila joogto oo aad ii hayso wiil yar oo bilaa hooyo ah oo aad koriso oo khidmad ama mushqaayad aan ku siiyo,waxay ku tiri waayahay waxba kama qabo.
Waxay sidaa ku wadato hawsheediiba wadaadkii ayaa safray waxaana uu kaga tegay halkaas gabadhii iyo wiilkii yaraa iyo ninkii shaqaalaha ahaa ee xoolaha raaci jiray.
Waa yaabe gabadhii waxaa soo weeraray ninkii xoolo raaca ahaa oo doonay in uu ka muraadsado laakiin way diiday waxaana ay u daruurtay gaashaanka,balse waxaa uu ugu hanjabay in hadii ay diido uu u gaysan doono dhibaato aan weligeed ka harin.Waxay ugu jawaabtay ilaahay baan talo saartay waxna ima yeeli kartid.
Waxaa uu soo qaatay mindi waxaanu gawracay wiilkii ay korinaysay ee lagu aaminay.wadaadkii markii uu yimina waxaa uu u sheegay in wiilkii ay dishay gabadhani.
Wadaadkii ma canaanan gabadhii ee waxaa uu siiyey laba diinaar oo ay ku lahayd Waayo sifaha qofka muslimka ayay ka mid tahay in uu dul qaato (kuwa carada ama xanaaqa iska demiya ee dadka ku khaldamana iska dhaafa ilaahay baa jecel.)
Waxaa uu amray in ay qaadato lacagtaas iskana tagto.
Waxay ka tagtay gurigii wadaadka waxaanay u socotay halkii ay ku ogayd dadkeedii Waxaa ay la kulantay iyadoo dariiqii maraysa nin dad badani bud ama garuun la dhacayaan oo ku qaylinayaan Markaasay naxday oo u naxariisatay oo ku tiri waar maxaad u dilaysaan ee uu idin yeelay waxay yiraaheen: wuxuu naga daynsaday lacag dhan laba diinaar oo uu na siin waayey! Oo bal ka warama hadaan idin siiyo labada diinaar ma sii daynaysaan ayay waydiisay kooxdii?
Haa ayay ugu jawaaben iga hooya ayey ku tiri miskiinkana sii daaya.
Waxay ka sii daysay kooxdii waxaana ninkii uu ku farxay sama falka ay u samaysay gabadhaasi waxaanu la sii sheekastay cabaar oo uu ka waraystay xaalkeeda waxaanay uga warantay qisadeedii oo dhamays tiran.
Waxaa uu soo jeediyey in ay is raacaan oo rafiiqaan wadankana ka tagaan oo wadan wanaagsan ay qabtaan taasna way isku waafaqeen.
Waxaa ay yimaadeen xeebtii doon baxaysa ayay arkeen waxaana ay yiraaheen aynu korno doontan.
Waxaa ay ku tiri raga ayaa hor kora ama fuula ee kor waxaa ay diidaysay marka ay doonida korayso in uu ka danbeeyo oo ay u muuqdo jirkeedu.
Waxaa hor fuuley ama koray ninkii laakiin maxaa dhacay waxaa uu la faqay naakhuudihii ama wadahii doonida waxaanu ku yiri “ma aragtaa gabadhaa iga dambaysa” “haa” ayuu yiri naaquudihii!
Kolkaasuu ku yiri: “ma iga iibsanaysaa waa adcoontaydiiye oo aan iib u wadee?”
Naakhuudihii: nacam mid la diidoba ma aha ee igala heshii” ayuu ku yiri
(Qiimihii baa hoos loogu heshiiyey waana uu ka qaatay lacagtii) waanu ka degay Doonidii isagoo gabadhiina u sheegay in alaab uu soo iloobay uu doonano, iyana ay iska sii tagto.
Markii Doonidii dhaqaaqday ee gunta Badwaynta ay marayso ayaa Naakhuudihii iyo kooxdiisii yiraahdeen haye, haye kumee gabar yahay. gabadhii oo yaaban ayaa tiri maxaa dhacay ?
Waxay ka caroodeen hadalkeedii waxaanay ku soo boodeen mar qura iyagoo leh miyaadan ahayn adoontayada?
Gabadhii ayaa tiri addoon sidee ah idinma aan fahmin?
Kooxdii doonta ayaa uga waramay qisadii ninka waxaanay yiraaheen maadaama aanu ku leenahay oo ku iibsanay waa in aad noo ogolaataa in aanu kaa muraadsano.Waar ilayn anagaa wax aragnay!
Waxay aragtay halka xaal la marayo waxayse mar walba xasuusnayd in Ilaahay uu yahay ka qura ee u hiilin kara.
(Illaahoow kuma caasiyi karo mana rabo in wuxuushtani I taabtaan ilaahoow ferej deg deg ah ayaan kaa baryayaa maanta waad ogtahay laabtayda waxa ku jira inaanan weligay u bareerin macaasiye)
Mar qura ayaa doontii gariirtay oo aay la ruxantay mawjado qoladii tuugada ahaydna dib u fadhiisteen doontiina waxaa qaatay oo ruugay mawjadaha halkaasna waxaa ku hoobtay dhamaan wasakhdii saarnayd Ilaahay adoonkiisa fiican isagaa yaqaan siduu uga badbaadiyee waxaa u soo go’ay gabadhii qori loox ay doontu lahayd waxay dusha uga baxday qorigii oo gaarsiiyey xeeb waxaana arkay looxa gabadhu saarantahay boqor muslima oo dalxiis u joogay xeebta waxaa uu amray in la soo badbaadiyo gabadha markii loo keenayna waxaa uu ka waraystay xaalkeeda waxaanay uga warantay qisadeedii bilowgii ilaa dhamaadkii waxaa aad ugu uga naxay qisooyinka soo maray waxaanu ku tahniyadeeyey taqwadeeda iyo sabirka ay u yeelatay dhibaatooyinkii soo maray.
Muddo yar kadib waxaa haweenaydii guursaday boqorkii waxaana ay u dhashay caruur magac ku yeeshay diinta islaamka.
Dulucdu qisadu waxa weeyaan in qof kasta oo ilaahay ka baqa Alle waxaa uu ku abaal marinayaa wanaag aakhiro iyo aduunkaba mana dayacayo illaahay swt ajarka dadka wanaagsan qof kasta oo muslima ha iska ilaaliyo dambiga iyo macaasida ilaahayna ha xasuusnaado meel kasta oo uu joogo hana ka baqdo.